क्षमा दिने बानीको विकास कसरी गर्ने ? – Enayanepal.com
क्षमा दिनु अनि क्षमा माग्नु कठिन कार्य हो । यही कार्यको कारण मानिसको सम्बन्ध बिग्रिरहेको हुन्छ । आफ्नो जीवनलाई सुखी तथा खुसी बनाइराख्न क्षमा माग्ने र दिने कलालाई दैनिक जीवनमा सक्दो उपयोग गर्नुपर्छ । क्षमा दिनु कतिपय अवस्थामा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । आफ्नो गल्ती नहुँदा सजाय पाएको अवस्थामा पछि गल्ती गर्नेले स्वीकार गर्दा क्षमा कसरी दिने भन्ने मनोभाव आउँछ ।
क्षमा दिनुको महत्व
जर्नल अफ बिहेभियर ल मेडिसिनको प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार क्षमा दिने बानीले सामान्य मुटुको चाल र रक्तचाप राम्रो हुनुका साथै तनाव पनि कम गराउँछ । यसले मानिसको हृदय र समग्र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउँछ ।
क्षमा दिनाले स्वास्थ्यलाई पाँचवटा महत्वपूर्ण फाइदा पुर्‍याउने बताइएको छ । शारीरिक लक्षण, औषधि प्रयोग, निद्राको गुणस्तर, थकान र मानसिक समस्यामा फाइदाजनक हुन्छ । यसले नकारात्मक असरलाई कम गराउनुका साथै आध्यात्मिक पक्षलाई बढाएर द्वन्द्व व्यवस्थापन र तनावरहित बनाउँछ ।
क्षमा दिने बानीले सकारात्मक ऊर्जा बढाउनुका साथै असल विचार, भावना र व्यवहारलाई स्थापित गर्छ । क्षमाभावले अरूलाई सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने भावनाको पनि विकास गर्छ ।
क्षमा दिनु हरेक दृष्टिकोणले स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त लाभप्रद छ । यसले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मद्दत गर्छ । कुनै पनि परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै जान दिनुले जीवनलाई नै आनन्दमय बनाउँछ ।
क्षमा दिने कसरी ?
क्षमा दिनु सजिलो कुरा भने पक्कै होइन । तर, असम्भव पनि छैन । नियमित केही अभ्यास र सही मनोभावना बनाउन सके सहज रूपमा क्षमा दिन सकिन्छ ।
माफी दिनाले आफ्नो भावनात्मक आशक्तिलाई नराम्रो हुनुबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । कसैसँग भएको विगतको घटनाबाट बाहिर निस्केर अघि बढ्न प्रयास गर्नुपर्छ । उक्त व्यक्तिलाई पनि माफी दिनु आवश्यक हुन्छ ।
नियमित ध्यानको अभ्यास गर्नुले पनि आफ्नो मन शान्त बनाउँछ । साथै, विगतको घटनाबाट बाहिर निस्कन मद्दत गर्छ । ध्यानको सही अभ्यासले सकारात्मक भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव र प्रेमभावलाई बढाउँछ ।
राति सुत्नुअघि वा बिहान उठ्नेबित्तिकै ध्यानको अवस्थामा बसेर उक्त परिस्थिति वा व्यक्तिलाई सम्झेर क्षमा दिएको वा क्षमा मागेको भिज्योलाइजेसन गर्न सकिन्छ । नियमित गरिने यस्तो भिज्योलाइजेनि विधिले बिस्तारै मनभित्रको द्वन्द्वलाई हटाई सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्छ । अाजकाे नयाँ पत्रिकाबाट